oxymoron | Zizawa's refuge
ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားစကားလုံးတွေထဲမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်အတွဲတွေနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ အသုံးအနှုန်းတွေ ရှိမရှိ ၀ိုင်းစဉ်းစားပေးကြပါ။ ကိုယ့်စကားလုံးအသုံးအနှုန်း ကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလို့ သဘောထားပေါ့နော့။
ဆိုလိုတာက ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေမှာ oxymoron လို့ခေါ်တဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးတွဲတွေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ ၀ိုင်းစဉ်းစားဖို့ပါ။
Oxymoron ကို အောက်စဖို့ဒ် အဘိဓာန်က ဒီလို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားပါတယ်။
oxymoron .noun.afigure of speech or expressed idea in which apparently contradictory terms appear in conjunction
ဥပမာပေးထားတဲ့ စကားလုံးက bittersweet ပါ။ အချိုနဲ့အခါးဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးနှစ်လုံးကို ပေါင်းပြီး တလုံးထဲသုံးထားတာပါ။ ဒီစကားလုံးကို ဆန့်ကျင်ဘက်ခံစားမှုတွေ ဥပမာ-၀မ်းနည်းဝမ်းသာ တပြိုင်တည်းဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
နောက်တခုက inferno winter. inferno ဆိုတာ ငရဲ၊ ငရဲတမျှပူသောဆောင်းပေါ့။
တခါ မဖြစ်နိုင်တာကို ပြောချင်ရင် oxymoron သုံးပြီးပြောနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ-top-down development. အောက်ခြေလူထုကစပြီးလုပ်မှ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်သူတွေက top-down development ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုတွဲသုံးတဲ့ oxymoron ထဲထည့်ပါတယ်။
ဗမာစကားလုံးတွေထဲမှာ စဉ်းစားကြည့်တော့ တောကြီးဆိတ်ညံဆိုတာတွေ့တယ်။ ဆိတ်တယ်ဆိုတာ တိတ်တာကိုပြောတာ။ ညံတာက ဆူတာပေါ့။ တိတ်တာနဲ့ဆူတာ နှစ်ခုပေါင်းတော့ ဘာအဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားလဲ။ ကူပြီးစဉ်းစားပေးကြပါအုံး။ oxymoron တွေရှိသေးရင်လဲ ပြောကြပါအုံး။
ဒီတခေါက် အားလုံးကို တဂ်ပါတယ်။ စိတ်ပါရင် ရေးကြပါ။
« Why funny poetry?
9 thoughts on “oxymoron”
အား..ခက်ခက်ကြီး..။ ဆံပင်ဖြူအောင်လုပ်တယ်။း)
သူက..ပို့စ်သပ်သပ်ရေးဖို့ မလွယ်ဘူးထင်တယ်။ စဉ်းစားလိုက်အုံးမယ်။
ဒီ- ဆြာမကလဲ..အရမ်း အဆိုင်းမန့် များတာပဲ။ 😀
Posted by K | 30/07/2009, 04:12
ဆိတ်ညံရဲ့ ခက်ဆစ်အဓိပ္ပါယ်ကိုတော့ ငြိမ်သက်သည်။ အသံတိတ်သည် လို့ ရေးထားတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။
Posted by sin dan lar | 30/07/2009, 07:40
ရှိပေမဲ့ ရှားလိမ့်မယ်။ မြန်မာစကားက ဧက၀ဏ္ဏဘာသာစကား ဖြစ်တာမို့ စကားလုံး နှစ်လုံးသုံးလုံး တွဲစပ်ထားရုံနဲ့ မူလ အဓိပ္ပာယ်ပျောက်ပြီး၊ အသစ်ဖြစ်လာတာမျိုး ရှားတယ်။ မူရင်း အဓိပ္ပာယ် ကျန်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဖျတ်ခနဲ ပေါ်လာတာတွေက… `ထူးမခြားနား´ `ချီးမွမ်းချေကျောက်´ `ဦးသွင်းပဲ့ဆုတ်´ `မချိပြုံး´ …။
ဆိတ်ညံမှာ ညံ ဆိုတာ ရှေးအသုံးက အသံကို ဆိုလိုတာပါ။
Posted by WPM | 30/07/2009, 09:30
Posted by Anonymous | 30/07/2009, 09:52
ပထမတခေါက် လာဖတ်သေးတယ်။ မပြောတတ်တာနဲ့ အသာလေး လှည့်ပြန်လာခဲ့တာ။ ခု မကေပြောလို့ ထပ်လာပါတယ်။ ကိုဝင်းပေါ်မောင် ပြောထားတာ လုံလောက်နေပြီ ထင်တာပဲ။ ကျမ ခေါင်းထဲလဲ အဲဒီလို စကားလုံးတွေ ပေါ်မလာဘူး။ နောက်မှ စဉ်းစားလို့ ရရင် လာပြောပါအုံးမယ်။
Posted by မေဓာဝီ | 01/08/2009, 19:00
ညီအကို မသိ တသိ အချိန်
အဖြူ အမဲ မသဲကွဲ ဘူး နော်
အဲဒါ တွေလို့ ထင်တာဘဲ။
Posted by Prince | 02/08/2009, 01:17
An oxymoron (plural oxymorons or, more rarely, oxymora) isafigure of speech that combines two normally contradictory terms. Oxymoron isaloanword from Greek oxy (“sharp”) and moros (“dull”). Thus the word oxymoron is itself an oxymoron.
An oxymoron is used mainly to create humour thus, for example leading an audience watchingaplay, to think about what’s happening and give themadeeper more meaningful understanding of the text.
Posted by Prince | 02/08/2009, 01:21
Ye pu ye chan.
Posted by mk | 09/08/2009, 02:33
အင်း… “ညံ”က ပေါရဏစကားမလား? WPM ပြောသလို “အသံ”ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ထွက်မထွက်တော့ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ မျက်မှောက်ခေတ် “ညံ” ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အနက်ရတဲ့ ရှေးစကားလို့ မှတ်သားဖူးတယ်။ အယင်က ညံ ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က “တိတ်ဆိတ်တယ်”ဆိုတာပါ။ ကျန်တာတော့ သိဘူးဗျို့။
Posted by Dho-ong Jhaan | 05/09/2009, 13:30